अमेरिकी डलर अहिलेसम्मकै महंगो, अन्य देशको विनिमयदर कति ?
जेठ १, काठमाडौ : आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२३ रूपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १२४ रूपैयाँ २३ पैसा पुगेको छ। त्यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १२८ रूपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १२९ रूपैयाँ ०३ पैसा पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आज अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदमा ८५ रूपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीमा ८५ रूपैयाँ ५७ पैसा तोकेको छ। क्यानेडियन डलर एकको खरिददर भने ९५ रूपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर ९५ रूपैयाँ ५५ पैसा पुगेको छ।
आज साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिदमा ३२ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीमा ३३ रूपैयाँ १२ पैसा पाइन्छ भने कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ३४ रूपैयाँ ०७ पैसा पुगेको छ।
यता युएई दिराम एकको खरिददर आइतबार ३३ रूपैयाँ ६६ पेसा र बिक्रीदर ३३ रूपैयाँ ८२ पैसा कायम गरिएको छ। मलेसियन रिंगिट एकको खरिदमा २८ रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीमा २८ रूपैयाँ २५ पैसा पाइन्छ।
आज राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार कुवेती दिनार एकको खरिददर ४०२ रूपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ४०४ रूपैयाँ ७२ पैसा पुगेको छ। बहराइन दिनार एकको खरिदमा भने ३२७ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीमा ३२९ रूपैयाँमा ५५ पैसा कायम गरिएको छ।
२०७९ जेष्ठ १, आईतवार प्रकाशित0Minutes 259 Views
डलरको भाउ नयाँ उचाइतर्फ उक्लिदैँ, कस्तो होला नेपालमा असर ?
अब टिकटकमा पनि युट्युव जस्तै आम्दानी गर्न सकिने !
वैदेशिक अनुदान ३२.७ प्रतिशतले घट्यो, आठ महिनामा एक खर्ब २६ अर्ब प्राप्त